केटी ले लाको थ्यो ‘लेस वाला अंडरवियर’, छूट्यो रेप आरोपी – BRT NEWS
केटी ले लाको थ्यो ‘लेस वाला अंडरवियर’, छूट्यो रेप आरोपी
आयरलैंड मा भएको रेप केस लाई लिएर पच्छिलो केहि दिन देखि सोशल मीडिया मा आंदोलन भइ रहेको छ . खासमा , आयरलैंड को कॉर्क मा एक रेप पीड़ित लाई गलत साबित गर्नको लागि वकील ले केटिलाई उसको अंडरवियरको सहारा लियो .
(तस्वीरें- सोशल मीडिया)
वकील को भनाइ थियो कि केटीले लेस वाला अंडरगारमेंट लागको थ्यो जसले यो साबित गर्छ कि केटी पनि संबंध बनाउन को लागि सहमत थी. र यो केसबत आरोपी लाई छोडयो
“के यो सबूत यो संभावना लाई सम्भव गर्दैन कि केटी पनि आरोपी तीर आकर्षित थी र कसैलाई मिलनको लागि तयार भएकी थि ? तपाई हरु लाई यो हेर्नु पर्यो की उसले कुन ड्रेस लगाकी थी.”
केस को दौरान बचाव पक्ष की वकील एलिजाबेथ कोनेल को यो तर्क सोशल मीडियामा तेजी संग वायरल भयो र सोशल मीडिया मा अंडरवियर को तस्वीरों को साथ #ThisIsNotConsent मूवमेंट चल्न थाल्यो .
केस ट्रायल मा सबुत को तौर मा अंडरगारमेंट देखाएको कारण ले सबैं तिर बिरोध प्रदर्सन भइ रहेको छ र सोशल मीडिया मा #thisisnotconsent हैशटैग को साथ आफ्नो अंडरगारमेंट को फोटो लाई पोस्ट गरेर न्याय को मांग गरि रहेको छ .
र एक रेप पीड़ित की आमाले पनि यसमा नाराजगी जताये को छ . उनको छोरी संग भएको घटना फेरी निकालियो . स्कॉटलैंड को एक छोरी माथि पनि केहि साल अगाडी कोर्ट मा सबैको सामने आफ्नो अंडरवीयर समातेर देखौन क लागि दबाव बनाएको थियो र पछि रेप केस ट्रामे को कर्णले उसने आत्महत्या गरेकी थी. रेप पीड़ित को आमाले भन्यो कि आयरलैंड मा भएको यो कारण मलाई धेरै पिडा भएको छ .
यो घटना जस्तै स्कॉलैंडमा 2002 मा एउटा ट्रायल चलेको थ्यो जसमा 15 साल को बच्चाको 17 साल को लिंडसे ऑर्मस्ट्रॉन्ग लाई रेप उअरेको दोषी पाइयो . कोर्ट केस को दुई पछि केटीले आत्महत्या गरेकी थी.
केटीको पैरेंट्स लिंडा ऑर्मस्ट्रॉन्ग र फ्रैंक फेर्ग्यूसन ले ओछ्यानमा आफ्नी छोरी लाई मृत अवस्थामा भेटेकी थि . उनले भनेकी थि कि उनकी छोरी लाई महसूस हुन्थ्यो कि ट्रायल को समय एक पल्ट फेरी उनको रेप भै रहेको थ्यो . त्यो ट्रायल को समय अपमानित र खराब महसूस गर्दै थि .
स्कॉटिश टीनेजर को कोर्टमा अंडरगारमेंट समातेर देखाउन का लागि भनिएको थ्यो र त्यसमा लेखेको थ्यो ‘लिटिल डेविल’ पनि पढ्न क लागि भनिएको थ्यो .
आफ्नो छोरी लाई गुमाएकी ऑर्मस्ट्रॉन्ग ले टेलीग्राफ मा कुरा गर्दै भन्यो , मा हैरान छु कि अहिले पनि यस्तो चिज लै सबुत मानेर इस्तेमाल गरीदै छ . माली एउटा साथीले स्टोरी पढ्न क लागि पाठकी थि त्यति खेर मलाई यो केस को बारेमा थाहा भयो . लग्यो थ्यो सबै खराब याद हरु ताजा भयो . मलाई बिस्वाश लागि रहेको थिएँन कि यस्तो कम अहिले पनि हुन्छ भनेर .
मेरो छोरी लाई कोर्ट मा तीन पल्ट अंडरवियर समातेर देखाउनु परेको थ्यो . आर्मस्ट्रॉन्ग की छोरी संग सितंबर 2001 मा घर घर नजिकै एउटा पार्क मा रेप भएको थ्यो . आरोपी लाई ट्रायल शुरू भएको एक साल पछि4साल जेल सजाई सुनाइएको थ्यो .
मिसेज आर्मस्ट्रॉन्ग ले भन्नु भयो , मेरो छोरी ले कोर्टमा भनेकी थि कि उनको अंडरगारमेंट च्याति दिए तर उसको बयान मानियो उनले भन्न चाहन्थी कि रेपिस्ट ले उसको अंडरगारमेंट खोलेको थ्यो .
उनलाई झुठो साबित गर्न क लागि उनको अंडरवियर देखौन भनियो ताकी यो सब साबित हुन् सकोस कि त्यो च्यातीएको थिएन .
उनि आफु लाई धेरै नै अपमानित महसूस गर्दथी र रुदै थि . उनको त्यो कपडा लाई तल राखी दियो तर उसलाई फेरी उठाउन लगाइयो .
बचाव पक्ष को वकील ले त्यो कपडा लाई उठाएर त्यसमा लेखिएको सब्द पढ्न लगाइयो . हुन त यो सब कुरा को यो संग कुनै लिनु दिनु थिएन कि यो च्यातिएको थियो कि थिएन
गवाही दिए देखि उनको मानसिक संतुलन बिगड़ी रहेको थ्यो . आर्मस्ट्रॉन्ग सब दिन आफ्नो छोरीको बारेमा सोच्थी र उनलाई कदापी यकिन भइ रहेको थिएन कि 2018 मा पनि कुनै रेप पीड़ित को अंडरगारमेंटमा ध्यान दिइन्छ .
आयरिश एग्जामिनर को रिपोर्ट को मुताबिक, बचाव पक्ष को वकील एलिजाबेथ ओ कोनेल ने जज लाई भन्यो , ‘तपाई लाई हेर्नु पर्थ्यो कि उनले कुन किसिम को कपडा लकि थि . उनले लेस फ्रंट वाला थॉन्ग लगाकी थि .’
अहिले पनि , सोशल मीडिया मा पछिल्लो एक हप्ता देखि यो घटना मा हजारों पोस्ट भैं सकेको छ . यहां सम्म कि आयरिश सांसद रुथ कोपिंगर ले नि संसद मा अंडरवियर देखाएर विरोध जताये क छन .
Previous नेपालीले विदेश घुमेरै सके ३५ अर्ब
Next जहाज खरिद प्रकरण : को-को छन् अनियमितताको ग्राण्ड डिजाइनमा? (हेर्नुहोस सिफारिस प्रतिवेदन )